14/04/2018 - Page 2 sur 5 -
Ankazobe : Vehivavy maty nokapaim-badiny tamin’ny famaky
Vehivavy iray 36 taona no namoy ny ainy rehefa nokapaim-badiny tamin’ny famaky. Tany Anosikely, fokontany Andrianony/Manjaka, kaominin’i Mahavelona, distrikan’Ankazobe no nitrangan’ity habibiana tsy roa aman-tany ity. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, dia noho ny …Tohiny
Ikalamavony : Kamio mpitati-bokatra notafihin’ny jiolahy
Kamiao mpitati-bokatra avy any Andakana , distrikan’Ikalamavony indray no notafihina jiolahy miisa 08 nirongo basim-borona 03 tany Ihazove, fokontany Fatsiana , afakomaly tokony ho tamin’ny 04 ora sy sasany tolakandro. Araka ny loharanom-baovao, dia nosakanan’ireo …Tohiny
Ankadilalana : Lasan’ny mpamaky trano ny lavanila 5kg
Nisehoana fandrobana niaro fitaovam-piadiana indray teny Ankadilalana, ny alin’ny 10 Aprily. Araka ny loharanom-baovao dia tranona mpamboly lavanila malaza ity niharan’ny fandrobana nataona jiolahy miisa roa ireto, izay tamin’ny fotoana tsy nahateo ity raim-pianakaviana no …Tohiny
Houcine Arfa : Nohamafisin’ny fitsarana ny saziny
Taorian’ny fampakarana izay notanterahin’ i Houcine Arfa ilay gadra nitsoaka teto Madagasikara, dia nivaly ny didy fa tsy marim-pototra ny fampakarana izay nataon’ ity farany, vokany dia voatazona hatrany izany ny didy izay efa nivoaka. …Tohiny